musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Michael Jordan Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeiyo Basketball ngano uyo anozivikanwa sa "Mweya Wake". Yedu Michael Jordan Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongorora kwacho kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake musati mazita uye mhuri yake kumashure. Kunyanya zvakadaro, akawanda OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti anowanzoonekwa kunge ndiye mukuru-kutenderera mutambi munhoroondo yeBhasiketi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Michael Jordan's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Michael Jordan Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Michael Jordan akaberekwa musi we 17th waFebruary 1963 kuBrooklyn muNew York City, United States.
Akanga ari wechina wevana vashanu vakaberekerwa naamai vake Deloris Jordan (mubhengi webhengi) uye kuna baba vake James Jordan (mutariri paine magetsi).
Nguva pfupi Michael aberekwa, mhuri yake yakatamira kuWilmington yekuNorth Carolina uko akakurira nehanzvadzi dzake mbiri, Larry (pfupi pane hama) naJames pamwe nehanzvadzi yake, Deloris, uye hanzvadzi yavo, Roslyn.
Udiki hwaMichael kuWilmington hwakavakirwa pamitemo yekuranga uye kushanda nesimba kunoitwa nevabereki vake vane mari. Nekudaro, iye aive asiri wese mukuru nekuchengeta kusvika kune izvo zvinodzidziswa. Iye mudiki aifungidzirwa zvakanyanya sehusimbe uye airatidza kusafarira kuwana hunyanzvi hwekumaindasitiri kana kuita mabasa epamba pavo (inoratidzwa pazasi).
Zvakangodaro, Michael akawanikwa akakodzera kuvandudza makwikwi mumitambo yake yehudiki, yekutanga pakati pawo yaive Baseball, mutambo waakatamba nababa vake asati atsika 'basketball nzira' yemukoma wake mukuru, Larry.
Michael Jordan Dzidzo:
Michael Jordan aive nedzidzo yake yekutanga kuOgden Elementary School muWilmington asati aenderera mberi kuenda kuTrask Junior High Chikoro muWilmington.
Dzimwe dzidzo dzakamuona achienderera mberi Emsley A. Laney High School muWilmington uko kwaakange akundikana kuyedza nechikwata chebhasikiti yechikoro semusikana wechipiri. Achiziva kuti akarambwa nekuda kwekusava nehurefu hunodiwa, Michael akawira pasi pachikwata chevadiki chebhasikiti yechikoro uye akanyora mashoma kubudirira.
Hazvina kutora nguva refu Michael asati ave mukuru kuchikoro chesekondari uye akatambira zvikoro zvekoreji senge 'Virginia', 'Duke', 'Syracuse' pamwe ne'North Carolina 'iyo yakaziva mashandiro ake muBasketball nekufambisa kudzidza kwake kuYunivhesiti yeNorth Carolina 'muna 1981.
Ndichiri kuUniversity, Michael, akange akadzidziswa naMusoro Coach Dean Smith, akazova Atlantic Coast Conference (ACC) Rookie yeGore ra1982. Akatorawo pfuti yakasvetuka iyo yakabatsira timu yake kuhwina 'NCAA Championship' kurwisa 'Georgetown Yunivhesiti '.
Michael Jordan Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
1984 raive gore rakasarudzika kuna Michael ane matambiro ese akamupa nzvimbo muTimu yeOlympics yeGoridhe yeGoridhe ya1984 yakamirira US muLos Angeles. Dzimwe nhengo dzechikwata chakakunda vanosanganisira vatambi vakaita saSam Perkins, Steve Alford, naPatrick Ewing.
Achidzoka kubva kumagamba ake eOlimpiki, Michael akasiya yunivhesiti kuti ajoine iyo 'NBA Draft'. Jaya rine chinzvimbo rakasarudzwa nechikwata 'Chicago Bulls' icho chaakabatsira kunyora shanduko kubva pakurasikirwa uye inokwevera kuhwina mitsara.
Michael Jordan Bio - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Kunyangwe kukuvara kwetsoka kwakatyora kwakaisa Michael pamitambo yake mizhinji mumwaka wa 1985-86, akaburitsa simba rakadzoka muna 1988 iro rakamuona achinzi Defensive Player wegore pamwe neLigi Inonyanya Kukosha Player (MVP). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
James Harden Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Michael Jordan Rudo Hupenyu:
Michael Jordan akaroora kaviri. Tinokuunzira mashoko ezvewanano yake. Kutanga pakati pehukama hwewanano hwaMichael kwaive kubatana kwenhoroondo nemukadzi wake aimbova mukadzi Juanita Vanoy.
Vakaroorana vakaparadzana vakatanga kusangana mu1984 pane imwe resitorendi muChicago. Juanita panguva iyoyo aive modhi uye munyori mukuru weAmerican Bar Association.
Vakaroora mushure memakore mana ekudanana uye hukama hwavo hwakakomborerwa nevanakomana vaviri, Jeffrey Michael, Marcus James, pamwe nemwanasikana, Jasmine.
Zvinhu, zvisinei, zvakashata makore 17 muwanano sezvo avo vakaroorana vakarambana nenzira yakanaka muna December 2006. Kusagadzikana kwakaratidzwa Juanita kugamuchira $ 168 mamiriyoni ekugadziriswa kwakaonekwa kuti ndiyo yakakurumbira kugadzirisa kurambana kwevanhu pamusangano wevanhu panguva iyoyo.
Mugore (2009) mutongi muCook County, Illinois, akatonga kuti Jordani haana kukwereta waaimbonzi mudiwa Karla Knafel madhora mamirioni mashanu pakutyora chibvumirano.
Sekureva kwaKnafel, (Mufananidzo uri pazasi) Michael anonzi akamubhadharira madhora mazana maviri nemazana mashanu ekuchengeta hukama hwavo hwakavanzika pamwe nekusaendesa sutu yababa mushure mekunge abata pamuviri muna 250,000. Zvisinei, ongororo yeDNA yakaratidza kuti Michael aive asiri baba vemwana .
Achifambira mberi, mutambi wacho akatanga ukama neAmerican Model, Yvette Prieto.
Doo akazosangana mu2009 pane imwe usiku usiku muMiami mushure mokunge vatora ukama hwavo kune imwe nhanho inotevera nekuroorana mu2013.
Imba yavo inokomborerwa neTwin Girls Victoria uye Ysabel vose vakazvarwa musi we 11th yaFebruary 2014.
Michael Jordan Hupenyu Hwemhuri:
Michael Jordan akaberekerwa mumhuri ye7 tinokuunzira mashoko echokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yake.
Pamusoro pababa vake: Baba vaMichael James Raymond Sr. Akazvarwa pazuva re31st raJuly 1936. NdiJames uyo akadzidzisa Michael kutamba baseball.
Zvakare, James paakaurayiwa zvinorwadza musi wa 23 Chikunguru 1993, Michael aichema akazivisa kutanga kwake kuenda pamudyandigere kubva kubhasikiti kuti aite basa muBhola.
Kusvikira kufa kwake kwakakonzerwa neVapambi vezvombo, James akashanda semutariri paMagetsi Magetsi uye anozivikanwa kuve akatsigira kwazvo Basa raMichael.
Pamusoro paamai vake: Amai vaMichael Deloris Jordan vakazvarwa muna 1941. Amai vevana vashanu vaimboshanda mubhangi izvozvi vanonyora mabhuku evana nezvehope nekubudirira. Pamusoro pekunyora, Deloris mukurukuri ane mukurumbira uye simba rinokurudzira kukunda kwevana vake.
Nezvevakoma vake vakuru: Larry Jordan ndiye mukuru pane hama. Aive Larry akasimudzira kuda kwaMicheal kweBhasiketi. Parizvino anobatsira kubata imwe yekudyara kwaMichael, Charlotte Bobcats.
Anotevera mumutsetse wekuzvarwa ndiJames Jordan Jr, murwi wehondo akaona chiitiko muIraq neKorea. Musoja akasiya basa ava anoshanda seMutevedzeri Wemutungamiriri weOrthation yeHornets Sports & Varaidzo.
Nehanzvadzi dzake: Hanzvadzi yaMichael mukuru Deloris Jordan amai vakarambana vevatatu vane yavo yekushambadzira agency.
Kusiyana nevanun'una vatatu, Deloris akarerwa zvinosiririsa nekuda kwekuti akashungurudzwa baba vake panguva iri nani yehudiki hwake.
Anorarama asina kubatana nemhuri yake uye akanyora bhuku, 'Mumumvuri wemhuri yangu', achiratidza kurerwa kwakashata.
Kune rimwe divi, munin'ina waMichael mudiki Roslyn munyori anobatsira amai vake kubata mamwe emapurojekiti emhuri.
Michael Jordan Bio - Mazita emazita:
Jordan ine mazita emadunhurirwa akati kuti anosanganisira "Air Jordan" "Nhema Katsi", "Mari", "Mhepo Yake" uye "MJ". Zvisinei, "Air Jordan"Uye"Mweya Wake"Kumira pakati pevamwe nekuda kwekuti Mikaeri akawana mazita emhando mbiri dzemadonki ake makuru uye yakakurumbira.
Michael Jordan Endorsement uye Investment:
Michael, kunyange ari pamudyandigere, anoita mari yakakosha kuburikidza nemikana yakawanda. Kutanga ndiko kubvumidzwa kwake kunoenderana nemhando dzakadai seGatorade, Hanes uye Upper Deck, McDonald's ',' Wheaties ',' Chevrolet ',' Nike ',' Hanes ',' Coca-Cola 'pakati pevamwe.
Kunze kwekubvumidzwa, iyo "Nhema Katsi" ine mari mumaresitorendi (Michael Jordan's The Steak House NYC), kambani yegorofu, danda guru muCharlotte Hornets, Mujaho weMotorsports pamwe nekugadzirwa kwemhedzisiro se: Michael Jordan cologne, Mhepo Jorodhani bhutsu yebhasikiti, Jordan Brand zvipfeko mutsetse, pakati peimwe mari.
Dzimwe tsigiro uye maInvestment anotarisirwa kuuya nemakore sezvo ngano ye "Mari" isiri yekuzorora pamahwashu ake.
Kukwikwidza kwandinoita ini ndinoda kubudirira. Zvagara zvichitaurwa kuti kana ndikatadza kuwana nzira yekuita chero chinhu, ini ndichawana nzira yekuzviita.
Michael Jordan Mafirimu:
Kunze kwebhakiti uye zvipindiro zvebhizimisi, Michael anofara mukuisa maonero mumavhidhiyo akawanda. Zvinosanganisira Space Jam (1996), Michael Jordan kuThe Max (2000) uye pamwe nehurongwa hweTV: My Wife and Kids (2004).
Micheal Jordan Chokwadi cheMunhu:
Micheal Jordan ndeye anozivikanwa nokuda kwekukwikwidzana kwake semutevedzeri uye ari mumiririri akaoma zvakanyanya kune vekati vake, kuti ivo akanyora bhuku pamusoro paro. Hunhu hwake hwepadare redzimhosva hunosanganisira kugona kushanda nemazvo pamwe nekubudirira nevamwe mubhizinesi nepo uchichengetedza kuzvidzora uye kuzvibata.
Pamusoro pezvimwe zvinhu zvake, Michael anoda zvinhu zvakanaka zvehupenyu uye anozivikanwa nekuchengeta mhuri neshamwari pedyo nemoyo wake.
Micheal Jordan Untold Biography Chokwadi:
Micheal akadzokera kuYunivhesiti yeNorth Carolina muna 1986 kunopedzisa degree rake muGeography.
Akangopfeka nhamba nhatu chete mubasa rake yekutanga nhamba ye45 yakazara munguva yekusekondari mazuva, nhamba ye23 yepamusoro pemaitiro emakambani uye 12 yemutambo mumwe chete nokuti mushandi akabata jeri rake kusati kwatanga imwe Bulls game mu 1990 pa Orlando.
Michael anoda kubhejera uye akambobvumirwa kurasikirwa nemadhora zviuru makumi mashanu nezvishanu muhusiku humwe pamberi pemutambo we57,000 playoff wakanangana neNew York Knicks muAtlantic City.
Michael anotya miviri mikuru yemvura nokuti akaona shamwari yake yakanyura mumvura uye yakangoerekana yakadzika pachake paakanga ava nemakore 11.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Michael Jordan Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!